PERIKOPA FJKM ALAHADY 27 OKTOBRA 2013 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 27 OKTOBRA 2013
12 Dia hoy izy: Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Abrahama tompoko.
13 Indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho; ary ny zanakavavin’ny mponina ao an-tanàna mivoaka hantsaka rano;
14 koa izay zazavavy hilazako hoe: Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho : dia izy ihany no aoka ho voatendrinao ho an’Isaka mpanomponao; ary izany no hahafantarako fa nasianao soa ny tompoko.
15 Ary raha tsy mbola nitsaha-niteny izy, dia, indro, tamy Rebeka, izay naterak’i Betoela, zanakalahin’i Milka, vadin’i Nahpra, rahalahin’i Abrahama, nilanja ny sininy teny an-tsorony.
16 Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virijina, ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy; ary nidina nankeo amin’ny fantsakana izy ka nameno ny sininy, dia niakatra.
17 Ary ilay mpanompo dia nihazakazaka nitsena azy ka nanao taminy hoe: Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho.
18 Ary hoy razazavavy: Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy.
19 Ary rehefa nampisotro azy izy, dia hoy koa izy: Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambara-pahatapiny misotro.
20 Ary dia naidiny faingana ny rano teo an-tsininy ho eo amin’ny tavy fisotroana, dia nihazakazaka indray izy nankeo amin’ny lavaka fantsakana hantsaka; ary nantsaka ho an’ny ramevany rehetra izy.
21 Ary ralehilahy nandinika azy tsara sady nangina, mba hahafantarany na efa nambinin’i Jehovah ny nalehany, na tsia.
22 Ary rehefa tapi-nisotro avokoa ny rameva, dia nalain-dralehilahy ny kavin’orona volamena iray, lanjan’ny sasaky ny sekely, sy haba volamena roa, lanjan’ny sekely folo, hatao amin’ny tànany;
23 ary hoy izy: Zana-jovy moa ianao ? Mba lazao amiko. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao?
24 Ary hoy izy taminy: Zanakavavin’i Betoela, zanakalahin’i Milka, izay naterany tamin’i Nahora, aho.
25 Ary hoy koa izy taminy: Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa.
26 Dia niondrika ralehilahy ka niankohoka teo anatrehan’i Jehovah,
27 ary nanao hoe: Isaorana anie Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, Izay tsy nanaisotra ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny tompoko; fa izaho dia notantanan’i Jehovah teny an-dalana ho atỳ an-tranon’ny havan’ny tompoko.
28 Dia lasa nihazakazaka razazavavy ka nanambara araka izany teny izany tamin’ny tao an-tranon’ny reniny.
25 Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary* roa ambin’ny folo taona [*Gr. narary nandeha rà]
26 sady efa niaritra zavatra be tamin’ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao mainka nihanarary kokoa aza;
27 koa rehefa nahare ny amin’i Jesosy izy, dia nankeo ivohony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany.
29 Ary niaraka tamin’izay dia ritra ny loharanon’aretiny*, ka tsaroany tao amin’ny tenany fa sitrana izy.[*Gr. fandehanan’ny ràny]
30 Ary niaraka tamin’izay dia fantatr’i Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia nihodina teo afovoan’ny vahoaka Izy ka nanao hoe: Iza izany nanendry ny lambako izany?
34 Ary hoy Izy taminy: Anaka, ny finoanao no nahasitrana* anao: mandehana soa aman-tsara, ary sitràna amin’ny aretinao.[*Gr. namonjy]
35 Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin’ilay mpanapaka ny synagoga ka nanao hoe: Efa maty ny zanakao-vavy; nahoana ianao no mbola manahirana ny Mpampianatra ihany?
36 Fa tsy nahoan’i Jesosy izany teny nataony izany, fa* hoy Izy tamin’ilay mpanapaka ny synagoga: Aza matahotra, minoa fotsiny ihany.[*Na: Ary nony ren’i Jesosy ny teny nataony, dia]
I Petera 5:5-11
5 Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa, dia maneke ny loholona*. Eny, samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa « Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena » (Oha. 3.34). [* Gr. presbytera]
6 Koa amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro;
9 tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalahinareo rehetra eran’izao tontolo izao.
10 Ary Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, Izay efa niantso anareo ho any amin’ny voninahiny mandrakizay ao amin’i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia Izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo.